आटोोग्राफ्ड पुस्तक सस्ता! | Martech Zone
सोमबार, अप्रिल 23, 2007 Douglas Karr
आज मैले पाए क्रिस बगगटको पुस्तक मेलमा, ओहो!
त्यसोभए यहाँ सम्झौता छ! यस पोष्टमा भएको पुस्तकमा क्लिक गरेर क्रिसको पुस्तकको प्रतिलिपि खरीद गर्नुहोस् र म अर्को उत्कृष्ट पुस्तक प्रदान गर्दछु, थ्योरी गुड बायलाई चुम्बन गर्नुहोस्, पहिलो3व्यक्ति जो मलाई एक पुष्टिकरण लिंक पठाउनुहोस् कि तिनीहरूले पुस्तक किने। पुस्तकहरू छन् आत्मकथा बब प्रोसेन आफैले!
म क्रिसको किताबका कारण उत्साहित छु।
म पुस्तक पढ्ने आशा गर्दैछु। क्रिस त्यसबेलादेखि रोडमा छ उनको कम्पनीको ग्रह भरका इमेल मार्केटरहरूबाट बोल्ने र सिक्ने सुरुवात। पुस्तक बन्नेमा कुनै शंका छैन मात्र ईमेल मार्केटिङमा पढ्न लायकको किताब!
क्रिस एक साथी र सल्लाहकार हुनुहुन्छ। ऊ खुला, इमान्दार, र साधारण चारैतिर राम्रो मान्छे हो। क्रिस र म चाँडै साथीहरू भएँ जब म उनको कम्पनीमा सामेल भएँ र ऊ टुटेको थियो जब उसले आफ्नो नयाँ सुरुवातको लागि छोडे (तर उसलाई थाहा छ कि म उसलाई खुशी बनाउँदै छु!)।
म किताबमा छु! त्यहाँ क्रिसले सोधेको ऑटोमेशन र इन्टिग्रेसनमा पुस्तकमा एक ठूलो खण्ड छ अमोल दलवी र मलाई प्रतिक्रिया दिन। यसलाई जाँच गर्नुहोस्... मलाई लाग्छ कि हामीले केही उत्कृष्ट सल्लाहहरू सँगै राखेका छौं एपीआई… ईमेल मार्केटिंगको साथ वा बिना।
मसँग किस थ्योरी गुड बाइको लागि th औं अटोग्राफिक प्रतिलिपि पनि छ इन्जिटेक, यस ब्लागको लामो समय पाठक जसले आफू बसेको पुस्तकको प्रतिलिपि फेला पार्न सकेन (यो अर्को हप्ता मेलमा हुन्छ, इन्ग!)।
बब प्रोसेनलाई उहाँको पुस्तकको अटोग्राफ गरिएका प्रतिलिपिहरू दयालु रूपमा पठाउनु भएकोमा विशेष धन्यवाद मेरो समीक्षा पढ्दै। म काममा र साथीहरूलाई उनको पुस्तक वरिपरि पास गर्दैछु! यो नेतृत्व र व्यवस्थापन रणनीतिहरूमा उत्कृष्ट पुस्तक हो जुन कुनै पनि संगठनमा फिट हुनेछ।
पंक नहुनुहोस्, हk्क हुनुहोस् र तपाईंको सामग्री को हिस्सा बनाउनुहोस्
अप्रिल 24, 2007 मा 1: 31 PM
धन्यवाद डग, यसलाई पढ्नको लागि तत्पर हुनुहुन्छ।
अप्रिल 25, 2007 मा 7: 48 एएम
म भित्र छु। मैले तपाईंलाई मेरो जानकारी पठाएको छु र क्रिसको नयाँ पुस्तक, विशेष गरी प्रसिद्धि खण्डमा तपाईंको नयाँ दाबी खोज्नको लागि तत्पर छु।
अर्को दिन म बोर्डर्समा पुग्दा मैले Kiss Theory Goodbye को दुईवटा अध्यायहरू पढ्ने मौका पाएँ, त्यो पनि अर्को उत्कृष्ट पुस्तक हो।